China gqoka kanye nomthelela wokumelana ne-92 alumina ceramic lining cone tube / taper tube for mining conveyor pipeline ifektri kanye nabaphakeli | YUNFENG
Gqoka futhi uthinte i-92 alumina ceramic lining cone tube / taper tube yepayipi lokuhambisa ezimayini
Incazelo Yomkhiqizo I-Abrasion Resistant Material Handling System I-Ceramic Lined Elbow Okubiza kakhulu okusebenzayo ukumelana nendololwane kanye ne-tee Sinho ukusetshenziswa kokunamathisela, i-welding noma i-dovetail ukulungisa i-ceramic engagqokanga odongeni lwangaphakathi lepayipi, kwakheka ungqimba oluqinile lwe-abrasion. Ngokumelana nokugqokwa okuphezulu kusetshenziswe kabanzi kumabhizinisi ezimboni ehambisa umoya, uhlelo lokudluliswa kwe-hydraulic, ikakhulukazi indawo yokuguguleka kwendololwane, itiye, nomsabalalisi. Ngenye yezinto ezinhle kakhulu ...
I-Abrasion Resistant Material Handling System Ceramic Lined Elbow
Izindleko zokugqoka ezingabizi kakhulu endololwaneni netiye
ISinho isebenzisa unamathisele, i-welding noma i-dovetail ukulungisa i-ceramic engagugi odongeni lwangaphakathi lepayipi, yakha ungqimba oluqinile wokuhuzuka. Ngokumelana nokugqoka okuphezulu kusetshenziswe kabanzi kumabhizinisi ezimboni ehambisa umoya, uhlelo lokudlulisa u-hydraulic, ikakhulukazi indawo yokuguguleka kwendololwane, itiye, nomsabalalisi. Ingenye yeziteshi ezinhle kakhulu nezindleko zayo zisebenza kahle.
Kusetshenziswa izinga lokushisa
Namathisela: ngezansi kwama-300 ℃
Ukushisela: ngaphansi kuka-600 ℃
I-Dovetail: ngaphansi kuka-800 ℃
Izinhlayiya eziqinile ezifana namalahle powder, umlotha, i-slag kanye ne-slurry, njenge-slurry yamalahle, i-slag ne-liquid aluminium.
Isetshenziswa kabanzi ekusetshenzisweni kwensimbi, izimayini, ugesi, amalahle, i-petrochemical nezinye izimboni, uhlelo oluqinile lwegesi, oluhambisa amanzi oluqinile, ikakhulukazi ukulimala okukhulu kwenzeka endololwaneni, izixhumanisi ezintathu.
Ukumelana nokugqoka okuhle kakhulu
Ukwamukela i-alumina ceramics njenge-liner, isikhathi sempilo sepayipi singaphezu kwezikhathi eziyi-10 kunensimbi ejwayelekile eqinile.
I-Alumina ceramic inezinzuzo zokuguguleka kwamanzi olwandle, ukumelana ne-acid ne-alkali, nakho kukhulisa ukuvikelwa.
Ubuso bangaphakathi bushelelezi futhi abukho ukuguguleka, ubushelelezi bangaphakathi bamapayipi buphakeme kunamanye amapayipi wensimbi.
Ipayipi elihlanganisiwe lingasebenza isikhathi eside ngaphansi kwezinga lokushisa elingu -50-800 ℃.
Isisindo sepayipi elihlanganisiwe lifika nje kuhafu wepayipi lamatshe lokusakaza futhi cishe amaphesenti angama-50 epayipi le-alloy. Ngezinzuzo zokugqoka nokumelana nokugqwala, isikhathi sokuphila kwepayipi side ngokuvelele kunamanye amapayipi amelana nokugqoka ngalokhu izindleko zokuhlangana nokusebenza kwehlisiwe kakhulu.
Ngenxa yesisindo sayo esincane nekhono elihle le-weld, ingahlanganiswa kalula ngokuxhumeka kwe-welding noma i-flange futhi inciphise ngokuphawulekayo izindleko zokulungisa.
Ngokuya ngosayizi wepayipi nezinto ezidlulisayo, lolu hlobo lwamapayipi angakhethwa ukusebenzisa izinhlobo ezimbili zesakhiwo se-ceramic, ithubhu jikelele ye-ceramic noma amathayili e-ceramic ahlanganiswe kwipayipi lensimbi. I-SINHO ingahlinzeka ngamapayipi ngokuya ngezidingo zamakhasimende.Ifakwa kakhulu ekuhlinzekeni imidwebo yemishini yakho nezici zesimo sesayithi, ngakho-ke sizokunikeza uhlelo oluhle kakhulu lokulwa nemihuzuko nokugqoka.
Langaphambilini gqoka insimbi engagqwali ulwelwesi lwensimbi
Olandelayo: I-92 alumina ceramic lining tube yesibhaxu nesixazululo esimelana nokugqwala
92% 95% Wear Resistant Alumina Ceramic Tube Pipe Elbow Yensimbi Engaphakathi Enomkhiqizi
Alumina bobumba ujenga yamalahle Pipe Ukuze Wear Ukumelana
I-Manuacturer Ceramic Lined Elbow Pipe Ngokumelana Kokugqoka Okuphezulu
Gqoka i-Abrasion Resistant Alumina Ceramic Lined Elbow Steel Pipeline